Okungaxhunyiwe ku-Car Wash Supplies | Isitolo Sokuthenga Esizonke
Ikhaya / Imikhiqizo / Izimpahla Zokuhlanza Imoto
Ukugezwa Kwemoto Engathinti
Imikhiqizo Yokuhlanza Imoto
Ucabanga ukuthi ukugeza imoto yizinto ezilula kangaka?
Uma uphuza ikhofi isikhashana, imisebenzi yokuhlanza imoto iphela! Imikhiqizo ye-OPS Car Wash yokuhlanza ingaphandle lemoto, susa ngempumelelo ukungcola kwemoto, ukungcola komgwaqo, udaka, i-shellac, njll. Uma usebenzisa ingaphandle lethu lokuhlanza imoto, njenge-OPS engathinti izimpushana zokuwasha izimoto, hhayi kuphela ezonga amanzi amaningi, izikhathi . kodwa futhi uzothola ukuhlanzwa kwemoto kuyahlekisa!
I-♣ isusa ama-Stuck-on on insects, ama-drop Resin amaconsi.
♣ Ingubo ecacile iphele ukuphepha.
♣ Kufanelekile ukuhlanza zonke izinhlobo zezimoto.
♣ Ngokuvamile esetshenziswe ngesandla noma isevisi yokuhlanza okuzenzakalelayo.
Yini ukugeza imoto okungathinti? Iphelele ekushayeni imoto engcolile kangaka ??
I-OPS igxile Ubuningi be-Carless Purity Powder ilungiselelwe ngokukhethekile uhlelo lokugeza izimoto,, i-hand Car Wash, i-automatic car wash.
Okufanelekile ukuhlanza zonke izinhlobo zezimoto kuma-ejensi wokuhlanza izimoto kanye nesiteshi semoto yemoto.
Inzuzo enkulu yento ayinathinti, ayisuleki. Asikho isidingo sokuwasha kanye nesiponji ukusula. Gcina amanzi nezindleko!
Wonke umsebenzi wokuhlanza kulula kakhulu futhi kulula ukuwenza. Vele ufafaze i-shampoo yokugeza imoto engenathinta bese uyihlanza nge-Pressure washer.
Hhayi bhala ngopende wanoma iyiphi imoto. Futhi ukuhlanganiswa okucwebezelayo ngenxa yempuphu kufakiwe ne-wax.
I-Alkalescent materail, isilinganiso se-PH singama-8.5, kudluliswe i-SGS, TUV, MSDS, isitifiketi se-CE. Kungakho kufanele ukhethe izimpahla zethu zokugeza izimoto!
Iyini imikhiqizo emihle yokuhlanza imoto yangaphandle?
♦ Itholakala ngezindleko zokulethwa kwe-powder, elula futhi ezishibhile, isikhwama esisodwa se-500g, singageza cishe ngama-40cars.
♦ Amanzi alondolozwe ngaphezu kwengxenye. Vele usebenzise azungeze i-30-40 amalitha amanzi ngemoto, Amanzi alondoloze amanzi!
♦ Geza kuphela futhi uhlanza kahle. Asikho isidingo sokusula, umuntu oyedwa uthatha imizuzu ye-3 yokuhlanza imoto eyodwa.
♦ Ezomnotho, elula ukuyisebenzisa futhi kususa kahle ukungcola ngokweqile, ithrafikhi iyahambisana nezinye izinto eziyingozi.
♦ Imikhiqizo yokuhlanza imoto ephansi ye-ph isula kalula futhi ushiye izindawo eziphezulu zikhanya futhi zihlanzekile.
♦ Ushiya ingilazi ehlanzekile kahle futhi ususe ngisho namashiya angcolile aphikisayo eduze kwamafasitela emoto.
♦ Imishini yokuhlanza imoto ivikela emisebeni yelanga elibomvu nelanga elibi kakhulu, okwenza imoto ibonakale entsha.
Indlela yokugeza imoto ngemikhiqizo yokuhlanza yemvelo?
♥ Hlanganisa iphakethe le-OPS elingenalutho lokugcoba lokugaya imoto emanzini ka-50kg ibhakede (dilution ratio 1: 80-120)
♥ Ungafakela kalula uketshezi (okwakushicilelwe umxhwele) emotweni yemoto kanye namabhubhu amane amasondo. Izoqedela ukusebenza cishe kwe-3emizuzwana.
♥ Hlanganisa imoto ekhishwe phezulu ukusuka phezulu kuya phansi (Okungenani ukucindezelwa kwamanzi kugcine i-60MPA)
♥ Ngemuva kokugcoba, ngokushesha umise imoto ngethawula elomileyo.
Uyabona, kulula ukunikeza impahla yokugeza imoto! Thintana nathi ukubhuka it!
Ukugeza imoto enhle kunazo zonke zokuhlinzeka ngemishini yokuhlanza imoto ngokuzenzakalelayo
♦ Khipha ipakethe ye-OPS yemoto yokuhlanza imikhiqizo (i-powder) emanzini ka-2kg ukuthola i-2.5kg yemoto yokugeza amanzi
(Phakamisa ukusebenzisa imvula emanzini afudumele ezinyangeni zasebusika ngomphumela omuhle).
♦ Ngemuva kwalokho yibeka ipompo elilinganayo ngokulinganisa kwe-4% usebenzisa i-liquid evolved car wash.
♦ Hlanganisa imfucuza yemoto ngokulinganayo uma imoto ishayela ku-Vehicle Wash.
♦ Lungisa ukucindezela komshini wokuwasha imoto ngaphezu kwe-60kg.
♦ Ngemuva kokugcoba, masinyane imise imoto enesilonda esikhulu.
Kuphawulwe: I-dilution ratio yangempela yi-1: 125
Kanye ne-powder yokugaya imoto etholakalayo ekuthengiseni okuhle (inqubo efanayo ne-automatic car wash)
Iyini isicelo salezi powder yokugeza imoto?
I-Hand Car Wash • I-Car Wash ezenzakalelayo • I-High-Pressure Cleaners • Iziteshi zesevisi yemoto
Ngabe ufuna umakhi wemikhiqizo yokuwasha imoto onokwethenjelwa? Silapha!
Ukunikezwa Kwezimoto Ukunikezela Imininingwane YeShidi
Ubuningi be-Carless Purity Powder
Umkhiqizo we-Spec. I-500g / 1 Bag
Inani US $ 2.00-2.50 500g / Bag (FOB Ningbo / Shanghai)
Isikhathi sokuqinisekisa Iminyaka engu-3-5
MOQ I-1 MT (izikhwama ze-2000)
Usuku lokuthumela Ngezinsuku ze-15.
Sicela uqinisekise ukuthi ungumuntu ngomuntu Key.